Android အတွက် Picsay pro နဲ့tube mate လာ ပြီနော်
အခုတင် တာ လေးတွေ ကတော့အ ဟောင်းတော့အဟောင်းတွေ ပါ ဒေါင်းလော့ ယူလို့ မရ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ပြန်တင် တာပါ ...android ဖုန်းတွေ အတွက်ပါ ပုံတွေပေါ် မှာ စာ ရေး လို့ရတဲ့ဆော့ ၀ဲ လေး နဲ့( picsay pro ) နဲ့youtube မှာ သီချင်း တွေ နဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင် တွေ ကို ဒေါင်းလို့ရစေ မယ့် ဆော့ဝဲ ( tube mate )ဆော့ ဝဲလေးပါ နော်။
သူငယ်ချင်း တို့ဒေါင်းလော့ယူမယ် ဆို ရင် ဒီမှာ ရှိတယ်နော် အဆင် ပြေ နိုင်ကြပါ စေနော် ...
Author လမင်းချစ်သူ at 12:10:00 AM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 1:23:00 PM0မှတ်ချက်
ဗေဒင် စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်းတွေ အတွက် အသုံးတည့်မှာပါ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျနော်တော့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Flash ဖိုင် လေးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဒီလင့်မှာ ၀င်ပြီး ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ကို မေးပြီး လက်ထောက်ဗေဒင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအောက်မှာလည်း တိုက်ရိုက် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Author Zaw Min Than at 11:49:00 AM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 8:37:00 AM 1 မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 1:12:00 PM2မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 12:35:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 2:07:00 PM4မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 11:38:00 AM0မှတ်ချက်
ထိုင်းနိုင်ငံကသူငယ်ချင်းတွေအတွက် Dtac Internet free 7ရက်ရယူတဲ့နည်းလေး
Dtac Internet free 7ရက်ပေးနေတာ ဟိုတနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်..ဒါပေမယ့် ရက်လွန်သွား
ပြီထင်လို့ မမှတ်ထားမိဘူး ခုမှဘဲပြန်ရှာပြီစမ်းကြည့်တာ အိုကေနေသေးတယ်
အချိန်ကတော့ ၇ ရက်ပေးပါတယ် ဒီလထဲမှာဘဲပေးတာလားတော့မသိဘူး အချိန်မနောင်းခင်
အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ လိုင်းကတော့မြန်နေတာဘဲ 3G 1 Gb ပေးပါတယ်
ထိုင်းက Dtacသုံးတဲ့သူတွေအတွက် အခွင့်ကောင်းဘဲနော်
မြန်မြန်လေးလုပ်လိုက်ကြပါဗျာ ဒီလိုမျိုးကရခဲတယ်နော် ပိုက်ပိုက်မှမကုန်ဘဲကိုးဗျ လိုချင်တာပေါ့နော့်
ဒီနံပါတ်နော်>>>> *104*781# <<<<<<
ပြီးရင် Message *101*1# ဆိုပြီးပို့လာပါမယ်Exp dateပြောပါလိမ့်မယ်
Author Unknown at 1:10:00 PM0မှတ်ချက်
မနေ့ညကမှအသစ်ထွက်လာတဲ့ Angry Birds Star Wars ll နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကို Angry Birds ချစ်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Angry Birds ဆိုတာကလည်းလူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသား နာမည်ကြီး Game လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်ပေးနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အောက်ကLink မှာဒေါင်း ယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 1:56:00 AM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 7:44:00 AM0မှတ်ချက်
fb ပေါ် မှာတော့
လက်ပ တောင်း ရောက်ရောက်
အ ရေးကြီးသတင်းအမြန် ရှယ်ပါ
ဓါးပဲထ သွေး ရ တော့မလိုလို
(ကို့ ကိုကျေးဇူးတင် ပါတယ်)
အိုင် ဖုန်းနဲ့အ ကြော်ရောင်းတဲ့
fb ဆိုတာ တောထွက်စရာမလိုပဲ
အ သေအချာကိုတရားရနိုင် တဲ့
Author Anonymous at 5:02:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 12:27:00 PM 1 မှတ်ချက်
November 27, 2013 မှာ Update ထွက်လာတဲ့ Facebook v3.9 (For Andriod Phone)
November 27, 2013 နေ့က အသစ်ထွက်လာတဲ့ Facebook လေးဖြစ်ပါတယ်။ Update ပဲသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်ရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
>>>>>Download Facebook v3.9<<<<<
Author Zaw Min Than at 1:54:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် Facebook
Window 8 တင်နည်းစာအုပ်ကို တောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နားလည်ပြီးသား သူတွေလည်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ အခုမှ စလေ့လာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အ လွယ်တကူ Window 8 တင်နည်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ရနိုင်အောင်လို့ လူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Window 8 တင်နည်းစာအုပ်ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Window 8 တင်နည်းစာအုပ်.PDF
Author Zaw Min Than at 11:42:00 AM0မှတ်ချက်
Microsoft ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်- Windows 8.1 PRO Preview (32-bit) Incl Permanent Activator (2.61 GB)
Microsoft မှ နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Windows 8.1 Professional Preview ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Windows နောက်ဆုံးထွက် လေးကို တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားကြသူများနဲ့ Windows အသစ်လေးတွေ သုံးချင်နေသူများအတွက်ပါ ကြိုးစားပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Windows 8.1 Professional Preview မှာ Microsoft Windows Update နဲ့ Microsoft Drivers တွေပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ အခြားမည်သည့်ဆော့ဝဲမှ မပါဝင်ပါ။
Windows 8.1 အင်စတော လုပ်နည်း...
-အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်း လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ကော်နက်ရှင်မရှိလျှင် Activate လုပ်၍မရပါ။
-ISO ဖိုင်ကို Power ISO ဖြင့် DVD (or) USB မှာ Bootable Image အဖြစ် Burn ပါ။
(အထူးသတိပြုရန်..**Bootable Image အဖြစ် Burn လုပ်နေစဉ် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊အခြားဆော့ဝဲ
များ အသုံးပြုနေခြင်း မလုပ်ရပါ။ဤသို့ လုပ်မိပါက ၎င်း Windows ကို Boot လုပ်လျှင် Boot မတက်ပါ။)
-ပြီးရင် Windows တင်နိုင်ပါပြီ။
-အင်စတောလုပ်နေစဉ် ထည့်ရမဲ့ Product Key မှာ...
-Windows တက်လာလျှင် Permanent Activator ကို အင်စတောလုပ်ပြီး Activate လုပ်ပါ။
-Restart ကျပြီးပြန်တက်လာရင် Windows က Activated ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
32-Bit System Only.. ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ ဒေါင်းပြီး Window ကို Extract လုပ်ရင် Extract password ပါပေးထားပါတယ်။ Extract password ရိုက်ပြီး Extract လုပ်လိုက်ပါ။
Author Zaw Min Than at 1:14:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 4:57:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 4:54:00 PM0မှတ်ချက်
DLL ဆိုရင် ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း ရင်းနှီးတဲ့ အသုံးနှုန်းလေးဖြစ်မှာပါ
ဒီကောင်ကလေး dll နဲ့ ပက်သက်တဲံ ပြသနာတော်တော်မျာများဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်
Window မှာ Antivirus ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် တခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်
Game တွေ ၊ Application တွေရဲ့ Library ဖိုင်တွေ / DLL File တွေ
dll-fixer ဆိုတဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ .dll ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူရှာပေးနိုင်ပါတယ်
Author Free Firmware And Tools at 10:03:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Computer Error ဖြေရှင်းနည်း
Author Zaw Min Than at 11:21:00 AM0မှတ်ချက်
ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေး Windows XP အသစ်- WINDOWS ELMAGIC V2 2013 (698 Mb)
အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံးသီတင်းပါတ်မှာထွက်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်အဆန်းနဲ့ ဆော့ဝဲအစံအလင် ပါရှိတဲ့
Windows XP SP3 Pro ကို Amr Adel က Modify ပြန်လုပ်ထားတဲ့ WINDOWS ELMAGIC V2 2013
XP ချစ်သူများ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
WINDOWS ELMAGIC V2 2013 | 698 MB Modified xp based on Windows xp Pro sp3 32 Bit
WMP 11 and IE 8 were updated
What have been added :
500 Shapes of Mouse
Courtesy of Amr Adel
(2): runburn the iso or make the bootable usb device and install
Author Zaw Min Than at 11:17:00 AM0မှတ်ချက်
Mirroecreator ဆိုဒ်မှ Download ယူနည်း( မယူတတ်သူများ မယူဖူးသူများဖတ်ရန်)
ဒေါင်းလုပ်မယူတတ်သေးသူများ မယူဖူးသေးသူများအတွက် ပုံနဲ့ ပြထားပါတယ်
ပုံကိုကြည်ပီး တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ကြည့်ပါ ။ မယူတတ်ခဲ့ရင် တိုင်ပတ်နေတာမလို့ 
ဒီနည်းလေးကို သေချာမှတ်ထား ဖြန်ဝေပါ သိတဲ့သူများကလည်း ရှင်းပြကူညီပါ
Author Anonymous at 2:06:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 9:41:00 AM 10 မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 9:35:00 AM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 9:24:00 AM2မှတ်ချက်
All Window 8 Loader v1.7.9 (Windows 8 အားလုံးကို Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်)
FB က သူငယ်ချင်းတယောက် ရဲ့ Window 8 မှာ Activated မဖြစ်သေးပဲ Warning စာလေးတတ် လာတာ အကူညီ လှန်းတောင်းလာလို့ All Window 8 Loader v1.7.9 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Window 8 Version အားလုံးကို Activated လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Loader လေးဖြစ်ပါတယ်။ Window 8 သုံးသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Window 8 မှာ Activated မဖြစ်သေးပဲ Warning စာလေးတတ်လာရင် ဒီကောင်လေးသာ သုံးကြည့်လိုက် ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Activated ဖြစ်စေမဲ့ Window 8 အမျိုးစားတွေကတော့...
Window 8 Loader ကိုအသုံးပြုရင် Antivirus ကိုပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မပိတ်ရင် Antivirus က စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ All Window 8 Loader v1.7.9 ကို လိုချင်သော သူငယ်ချင်း များ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download All Window 8 Loader v1.7.9<<<<<
hotfile, dropbox, zippyshare,
Author Zaw Min Than at 9:45:00 AM3မှတ်ချက်
Labels: Window 8 ဆိုင်ရာ, Window Loader
Author Zaw Min Than at 11:44:00 AM 1 မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 12:57:00 PM0မှတ်ချက်